Miyay Barcelona Suuqa January Lasoo Wareegaysaa Neymar JR? Madaxweynaha Kooxda ee Bartomeu Ayaa Jawaab Cad Bixiyay - Gool24.Net
Miyay Barcelona Suuqa January Lasoo Wareegaysaa Neymar JR? Madaxweynaha Kooxda ee Bartomeu Ayaa Jawaab Cad Bixiyay
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa jawaab cad ka bixiyay haddii kooxdiisu ay leedahay qorshe ay suuqa qaboobaha ee bisha January kula soo wareegayso Neymar oo Paris Saint-Germain ka tirsan.
Neymar ayaa si balaadhan loola xidhiidhinayay suuqii xagaaga inuu usoo wareegi doono Camp Nou markale iyadoo xataa kooxdiisa Paris Saint-Germain ay saxaafada kahor sheegtay inuu doonayo bixitaan.
Madaxweyne Bartomeu oo shalay bixiyay warayso faah-faahsan oo uu waxbadan kaga faalooday ayaa sheegay in heshiiskii dhicisoobay ee Neymar ay iyagu waxkasta sameeyeen sidoo kalena xiddiga qudhiisu uu dedaal badan sameeyay balse dalabaadka Paris uu ku batay.
Kaddib fashilka ku yimid qorshahaas hore, Madaxweyne Bartomeu ayaa sheegay inaysan gabi ahaanba lahayn wax qorshe ah oo ay saxeexa 27 jirkan ku samaynayaan suuqa ugu soo horreeya ee January.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa sheegay inay wada-hadalada qorshaynta kusoo noqdaan bisha koowaad ilaa labaad ee sanadka cusub balse aysan Neymar mar dambe u laaban doonin haddii Paris ay sii wado dalabaadka aadka u sarreeya.
Josep Maria Bartomeu ayaa yidhi “Suuqa jiilaalka isagu (Neymar) maaha dookh, Qorshaynta xilli ciyaareedka soo socda waxa la sameeyaa January, Febraury”.
“Xilligaasi waxa uu noqon doonaa marka aanu kusoo laabano ka hadalka mawduuca laakiin ma noqon doonto haddii PSG ay sii wado dalbashada tirooyinka sidaas u badan”.